'केन्द्र सरकारको गलत नीतिका कारण प्रदेश नम्बर दुई दरिद्र प्रदेश भएको छ' %%page%'केन्द्र सरकारको गलत नीतिका कारण प्रदेश नम्बर दुई दरिद्र प्रदेश भएको छ'% | रिपोर्टर्स नेपाल
‘केन्द्र सरकारको गलत नीतिका कारण प्रदेश नम्बर दुई दरिद्र प्रदेश भएको छ’
देश संघियतामा गइसकेपछि पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पुरानै शैलीको ल्याइएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले त झन प्रदेशलाई काम गर्ने वातावरण नै नदिइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने अधिकारसमेत प्रदेश सरकारलाई नदिएकाले काम गर्न नसकिएको कतिपय मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ । यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर प्रदेश नम्बर दुईका मूख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
जनताले काम खोजेका छन् । तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौँ । तर काम गर्नका लागि संघीय सरकारले सहज वातावरण बनाएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनको रोडम्याप नै छैन । बजेटलाई केन्द्रमा राखिएको छ । सबै प्रदेशलाई गरेर जम्मा १३ प्रतिशत बजेट दिइएको छ । यो के गर्न खोजेको ?
तपाईको दल पनि त संघीय सरकारमा छ नि ? संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अब कसलाई दोष दिने ?
हाम्रो दल त नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेपछि सरकारमा गएको हो । अहिले सरकारमा को छ भन्ने भन्दा पनि समग्रमा संघीय सरकारको नीति के हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सबै काम केन्द्र सरकारले गरिदिने हो भने तपाईहरुको काम के त ?
हामीले सिमित स्रोत र साधनका भरमा पनि यो प्रदेशको विकास र समृद्धि गर्ने अठोट लिएका छौँ । काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । सिमिति स्रोत साधनलाई भरपुर प्रयोग गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ ।
स्रोत र साधन पनि प्रदेशभित्रै खोज्ने मुख्यमन्त्रीको दायित्व होइन ? केन्द्र सरकारको आलोचना गरेर मात्रै हुन्छ र ?
अब मैले बाटो, नदी, रोडमा गएर साधन र स्रोत खोज्ने हो र ? स्रोत जुटाउनका लागि त केन्द्र सरकारको नीति चाहिन्छ । हामीले कुन कुन शीर्षकमा कर उठाउने ? करको सबै अधिकार केन्द्रले राख्ने अनि हामीले कसरी स्रोत साधन खोज्ने ? कुनै दातृ निकायसँग सहयोग माग्न पर्यो भने पनि अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग स्विकृति लिनुपर्छ । यो कस्तो नियम हो ?
प्रदेश नम्बर दुईका मुख्य समस्या केके हुन् ?
थोरै भूगोलमा धेरै जनसंख्या छ । मानव विकास सुचकांकमा पछाडि परेको छ । यहाँका जनता गरिब र दरिद्र छन् । प्रदेश नम्बर दुई दरिद्र प्रदेश भएको छ । बेरोजगारीको समस्या छ । सबैभन्दा धेरै युवाहरु यही प्रदेशबाट पलायन भइरहेका छन् । यो प्रदेश दरिद्र, गरिब र पछाडि पर्नु भनेको समग्र देश नै पछाडि पर्नु होइन ? यसरी विकास र समृद्धि कसरी हासिल हुन्छ ?
संघीय सरकारले तपाईलाई कुनै पनि अधिकार दिएको छैन ?
के अधिकार दिएको छ भन्नुस् त । संघीय सरकारले त संघीयता कार्यान्वयनको रोडम्याप नै बनाएको छैन । नीति र कार्यक्रमले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने कुरा गरेको छैन । बजेट ल्याउँदा प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारलाई प्राधिकरण र विकास एजेन्सी जस्तो बनाएर कसरी काम गर्न सकिन्छ ?
प्रदेश नम्बर दुईमा फोरम र राजपाबीचको सरकार छ । संयुक्त सरकार अहिले संकटमा परेको हो । राजपा र फोरमबीच एकमत छैन भनिन्छ नि ?
सरकार संकटमा छैन । दुई दलबीच पाँच वर्षसम्म सरकार टिकाउने सहमति भएको छ । कसैले केही भन्दैमा त्यो सहमति टुट्नेवाला छैन ।
किन भने ट्रम्पले पत्रकारलाई ‘जनताका शत्रु’?
स्काउटलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिन्छ : मन्त्री विश्वकर्मा
“मोदी-ओली केमेष्ट्री मिलेको छ, भ्रमणसँगै असमझदारी हट्छ”
बाटो मर्मत नहुँदा अस्पताल आउने विरामीलाई सास्ती
सैनिक कल्याणकारी कोषको सम्पत्ति रु ३९ अर्ब ५५ करोड
सुर्खेत क्षेत्र नम्बर दुईमा नवराज रावतले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार पूर्वमन्त्री हृदयराम थानीलाई ८ हजार ८०१ मतले पराजित निर्वाचित
शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध १० अर्ब २ करोड बढी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर